DA-7 A3-heerka qaabeynta 1.Constant Height Head Ender: Joogga sare ee go'an dhererka madaxa wuxuu saamaxayaa helitaan deg deg ah oo fudud oo loo maro bukaanka madaxa, qoorta iyo thorax. 2.Split Side Rails: 4pcs PP side jidadka waxay siiyaan bukaanka kahortagida dhicitaanka. 3. Qalabka matooriga ah ee lagu ridi karo: Qalabka matoorku waa alwaax resinol ah oo si fudud looga saari karo uguna sahlan jeermiska. Barxada joodariga ayaa raajo u samayn kara raajada gadaasha waxayna soo bandhigi karaan bukaanka raaxo badan. 4. Kalkaaliyaha Kalkaaliye Caafimaad ee Sent ...
DA-7 A2 Qaab dhismeedka 1.Constant Height Head Ender: Joogga sare ee go'an dhererka madaxa wuxuu saamaxayaa helitaan deg deg ah oo fudud oo loo maro bukaanka madaxa, qoorta iyo thorax. 2.Split Side Rails: 4pcs PP side jidadka waxay siinayaan bukaanka ka ilaalin dhicitaan iyo 2 kumbuyuutarrada kale ee dhinaceeda kale ee u dhow guddiga lugtu waxay bixiyaan adeegyo badbaado dheeri ah sidoo kale waxay bixiyaan taageerada inta istaaga bukaanku. 3. Nidaamka Miisaaniyadaha La-isku-Fiirsado: Guddi-hoosaadka xakameynta qolka jiifka ee ku yaal cagta hoosteeda ayaa laga ilaaliyaa saamaynta ...
DA-7 A1-Qaanuunka 1.Split Side Rails: 4pcs Saddexda dhinac ee PP waxay bukaanka ka difaacaan ka hortagga dhicitaanka iyo 2-da kumbuyuutar ee dariiqyada dheeriga ah ee u dhow guddiga cagtu waxay bixiyaan adeeg badbaado dheeraad ah iyo sidoo kale waxay bixiyaan taageerada inta ay taagan tahay bukaanka. 2. Nidaamka Miisaaniyadaha La-isku-halleeyo: Guddi-hoosaadka xakameynta qolalka jiifka oo ku yaal dhamaadka lugta ayaa laga difaacayaa saameynta. Qalabka Furaha ee laga-saari karo: Qalabka matoorku waa guddooyin caag ah oo si fudud looga saari karo oo u fududaanaya jeermis-dillaaca ...